JONGA EZONA NDAWO ZINTANDATHU ZIJONGWA KAKHULU KWIHLABATHI KWI-RIGHTMOVE NGO-2020 - IINDABA
Jonga ezona ndawo zintandathu zijongwa kakhulu kwihlabathi kwi-Rightmove ngo-2020
Ezi zezona ndawo zijongwa phesheya kwiwebhusayithi kunye nendawo yokuhlala yaseNew York ejonge Central Park kunye nepropathi yokujonga ulwandle eMajorca
Ngaba ukhe wadideka ukuba ubomi besiqingatha esahlukileyo, okanye ngaphezulu ngokuchanekileyo, i-1% eyahlukileyo?
Indawo enkulu yepropathi yase-UK, i-Rightmove, ityhile ukuba zezona ndawo zintlanu zijongwa kakhulu kumazwe aphesheya kwi-2020 ezinikezela ngombono wesitshixo.
Banendawo yokuhlala eyi- $ 20m yaseNew York ejonge eCentral Park, eyi- £ 2.3m ephezulu endulini yokuhlala ebukekayo esekwe kumhlaba ongenamakhwiniba ngaphandle kwedolophu yaseRhodes, kunye nepropathi yolwandle ebukekayo eyi- $ 32m eCamp de Mar kwi ifunwa emva konxweme olusemazantsi-ntshona eMajorca.
Ezi zimbini zahlukileyo ziyi-30 yezigidi zeerandi eCarlifonia kwaye ekugqibeleni oko kuchazwa njengomsebenzi wobugcisa wekhonkrithi, isinyithi, ilitye kunye neglasi ebonelela ngeembono zediploma ezimangalisayo ezingama-360 kwaye kwakamsinya nje xa isitatimende seWWII sime ngobuchule ukukhusela unxweme kwiHalifax Harbour e INova Scotia, Canada, eyakho ngexabiso eliphantsi ngokuthelekisa i- $ 2.2m.
UMlawuli weeNkcukacha zePropati uTim Bannister uthe: Njengabantu abaninzi abaya kuyincoma, ibiyinto engaqhelekanga kwiinyanga ezili-12 kwintengiso yaphesheya njengoko abantu bebenqunyelwe ukubhabha phesheya kwezilwandle ixesha elininzi kwiinyanga ezili-12.
Nangona kunjalo, sikubonile ukuthanda ukwazi okukhulu kwipropathi yaphesheya kwezi nyanga zili-12, kwaye inyani kuye kwakho i-18% yokuphuculwa konyaka kwiintlobo ngeentlobo zabathengi kwiwebhusayithi yethu yamanye amazwe ngo-2020. uluntu ukujonga iipropathi phesheya.
Nali ithuba lakho lokujonga ngaphakathi kweepropathi ezintlanu ezijongwa kakhulu kwi-Rightmove kwi-2020.
Izigaba: Iwiki Inetflix Hollywood
ziiposi ezivaliweyo ngemini yamagqala
Idepho yasekhaya ivule usuku lwesikhumbuzo
akukho meyile ngosuku lwe-mlk
Imali eyinyani igama lokwenyani
ngaba oomama bomdaniso bayahlawulwa